Muwaadinnimada Montenegrin ee saamiga Durmitor Hotel & Villas
Kaliya lagu daray gaadhigii
Eeg gaadhiga ()
Sii wad adeegashada
Xir sanduuqa raadinta
Dhalashada Hanti Ma-guurtada
Iib La iibiyey
baadi Qiimaha kujira safka "Tirada" kama yaraan karo 1
Ku dar shay gaadhigii
Maalgashi Hoteel + Muwaadinimada Montenegro
Bartamaha beerta quruxda badan ee Montenegro, Durmitor National Park, oo u dhow harada Black (Crno Jezero),
Hoteelka Durmitor & Villas ayaa bilaabay dhismaha goob dalxiis oo gaar ah oo ka kooban Durmitor Hotel iyo agagaarkiisa.
Huteelka cusub ee Durmitor wuxuu noqonayaa hudheelkii ugu horreeyay ee 5 xiddig leh ee ku yaal Zabljak, kaas oo si weyn u dhammaystiri doona dalabyada dalxiiska ee gobollada buuraleyda ah.
Bannaanka hoteelka wuxuu lamid noqon doonaa hudheelkii hore ee Durmitor, oo astaan ​​u ahaa dalxiiska buuraha ee Montenegro.
laga soo bilaabo 1939, oo sidaas darteed waxay u soo bandhigi doontaa booqdayaasheeda jawi buur dhab ah, iyo sidoo kale casriyeyn iyo raaxo.
Hoteelka ayaa yeelan doona 55 guri oo raaxo leh, 2 maqaayadood, xarun caafimaad iyo isboorti, barkadaha gudaha iyo banaanka, qolka ciyaarta carruurta, qolka shirarka iyo qolka shirarka.
Sidoo kale agagaarka hudheelka waxaa laga dhisi doonaa 13 guri oo buuro ah, oo waliba dhalaalaya 5-xiddig leh.
Soojiidashada gaarka ah ee dalxiisku waa meesha ay ku taallo, taas oo caan ku ah quruxdeeda dabiiciga ah ee aan caadiga ahayn oo aan cidna uga hari doonin.
Dadka soo booqda dalxiiskan waxay isku arki doonaan meesha saxda ah ee xiisadaha buuraha, laakiin haddii ay rabaan inay nastaan, waxay sidoo kale joogi doonaan meesha saxda ah si ay ugala soo baxaan mashquulka iyo dhaqdhaqaaqa nolol maalmeedka, uga nastaan ​​nolosha xawliga ku socota iyo ku raaxayso nabadda iyo xasilloonida dabiiciga.
Hoteelka Durmitor wuxuu ku yaalaa woqooyiga Montenegro ee magaalada Zabljak (magaalada leh joogga ugu sareeya Balkans, oo ah joog sare oo ah 1450 m ka saraysa heerka badda) iyo ilaa toban daqiiqo oo lug ah kana soco wabiga ugu quruxda badan
Beerta Qaranka ee Durmitor - Black Lake (Crno Jezero).
Wadada E65 waa wadada isku xirta Zabljak iyo inta kale ee Montenegro waana wadada ugu weyn ee isku xirta xeebta Montenegrin, Podgorica iyo waqooyiga.
Isku xirka gaadiidka kale ee muhiimka ah waa wadada dhex marta Shavnik iyo Niksic ilaa Risan ama Podgorica.
Magaalada sidoo kale waxay leedahay garoon diyaaradeed (garoonka diyaaradaha Zabljak), laakiin garoomada diyaaradaha ee ugu dhow waa:
Madaarka Podgorica wuxuu u jiraa 130 km. Waxaa jira duulimaadyo joogto ah oo ka baxa garoonkan dhammaan Yurub.
Gegada diyaaradaha Tivat waa garoonka labaad ee ugu dhow waana 170 km oo u jirta - saddex saacadood iyo badh baabuur.
Barnaamijka waxaa loogu talagalay 3 sano, iyadoo 2000 codsadeyaal la qorsheeyay.
Iyadoo la tixgelinayo in dhismaha hoteelka Durmitor iyo villa ku hareeraysan ay maalgashi ku tahay waqooyiga dalka, ayaa looga baahan yahay dowladda inay bixiso
qadarka 100 euro ee horumarinta + maalgashiga 000 euro (qiimaha waxaa ku jira VAT).
Intaas waxaa sii dheer, codsaduhu waa inuu bixiyaa:
15000 euro codsi shaqsiyeed,
€ 10 xubin qoys oo dheeri ah iyo ugu badnaan afar xubnood oo qoyska ah, iyo
50 euro xubin kasta oo qoyska ka mid ah oo ku xigta.
Sababaha ay tahay inaad u dalbato baasaboor Montenegrin ah:
Jinsiyadda waxaa lagu helaa 6 bilood gudahood.
Carruurta yar yar ayaa sidoo kale ka dalban kara codsadaha weyn.
Codsadaha looma baahna inuu ka tanaasulo muwaadinimadiisa hadda.
Soo gal bilaash ah fiiso la'aan 123 dal.
Meel juquraafi ahaan aad u faa'iido badan waddanka.
Meel ku habboon in lagu nagaado.
Qaar ka mid ah dukumiintiyada aasaasiga ah ee looga baahan yahay arjiga:
Shahaadada diiwaan gelin dambi la'aan;
Xogta shaqsiyeed iyo resume gaaban oo shaqsiyeed;
Share La wadaag Facebook
Tweet Ku dheji Twitter
Abuur pin Ku keydi Pinterest
Ku laabo Jinsiyadda Montenegro
AAAA la taliye LLC
Cinwaanka: Arthur Evelyn Dhismaha Charlestown, Nevis, Saint Kitts iyo Nevis Telephones: + 44 20 3807 9690 E-mail: info@vnz.bz
Cinwaanka: Estonia, Tallinn, Pae 21, xafiiska 25 Telefoonnada: + 372 712 0808
East, Federation Tower, Presnenskaya nab., 12, dabaqa 19, Moscow, 123100 Telefoonka: +7 495 991 70 20, +7 495 991 99 20, +7 910 000 70 20 E-mail: info@vnz.su
WhatsApp Viber telegraam
Cinwaanka: Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Telefoonada Slovenia: + 386 64 233 000, + 386 64 177 151, + 386 31 728 023
Cinwaanka: Singapore, 7 Temasek Boulevard Suntec Tower One # 12-07 Telefoonada: + 6531593955
Cinwaanka: Shiinaha, Hong Kong, 15 / F Millennium City 5, 418 Kwun Tong Road Telephones: + 852 81703676
News iyo qiimo dhimis:
Jinsiyada Antigua iyo Barbuda
Jinsiyadaha Saint Kitts iyo Nevis
Jinsiyadaha Saint Lucia
Sidee loo bilaabayaa?
Heshiiska ka shaqeynta xogta
Dhalashada Muwaadiniinta Shiinaha
© 2021, ªº On the Shopify platform
U adeegso fallaadhaha bidix / midig si aad ugu dhaqaaqdo muuqaalka ama u dhaqaaq bidix / midig haddii aad isticmaaleysid qalab mobiil ah
Xulashada natiijooyinka sheyga la iftiimiyay ee bogga dhammaystiran cusbooneysiinta.
Guji bar-tilmaameedka ka dibna fureyaasha fallaarta si aad u muujiso shayga aad rabto.